Mari-nehupfumi, 04 Gumiguru 2019
Chishanu 4 Gumiguru 2019
Madhokotera Makuru Oramwawo Mabasa
Vanachiremba vari pasi pesangano reSenior Hospital Doctors’ Association, vatangawo kuramwa mabasa nhasi vachitsutsumwe nenyaya yemihoro pamwe nekusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvehurumende, izvo zvasiya hupenyu hwevarwere vakawanda huri parumananzombe.
Gumiguru 02, 2019
Madhokotera Anoratidzira Zvakare Achiti Hurumende Igadzirise Zvichemo Zvavo
Madhokotera aratidzira zvakare pachipatara cheParirenyatwa muHarare achitsutsumwa nekwaati kusagadziriswa kwedambudziko rawo kuitira kuti akwanise kudzokera kumabasa.
Vari Kunze kweNyika Vobatsira Vari Kumusha neZvinodiwa paKurima
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvagara zvichibatsira hama neshamwari kumusha nezvakasiyanasiyana zvinosanganisira zvekudya nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi hwenyika munyika.
Gumiguru 01, 2019
Zvinhu Zvoramba Zvakaipa Muzvipatara zveHurumende
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctor’s Association, Doctor Masimba Ndoro, vati havasati vapihwa mari inokodzera kunge vachikwanisa kuenda kubasa izvo zviri kuramba zvichiisa hutano hweveruzhinji
MDC Inobuda Muparamende VaMnangagwa Vachitaura
Vachitaura neStudio 7 panze pedare reparamende mushure mekubuda VaMnangagwa vachitaura, sachigaro weMDC, Muzvare Thabitha Khumalo, vati bato ravo haricherechedze VaMnangagwa semutungamiri wenyika sezvo vakabirira sarudzo zvemhando yepamusoro uye zvisina mukare akamboona.
VaMnangagwa Vanoti Vari Kushushikana neKutyorwa kweMitemo yeNyika
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vashora vanhu vanoita zvekutenga nekutengesa mari pamukoto vachiti vari kuita izvi vari kuda kuparadza hupfumi wenyika.
Pova neMaonero Akasiyana paMashoko eSONA Aturwa naVaMnangagwa
Nyanzvi iri kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg ku South Africa, Doctor Pedzisai Ruhanya, vanoti VaMnangagwa vangobatabata zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe, asi havana kuenda pamwongo kuti vatarise kuti zvinhu zvese zvri kunetsa zviri kukonzerwa nechii.
Hurumende Yavhara Mamwe Marezinesi Enzira Dzinofambisa Mari
Pane mifungo inopesana pamatanho akatorwa ekuvhara kuri kuitwa mamwe marezinesi enzira dzinofambisa mari, vachipomera mhosva yekuendesa mari pamisika mitema apo painonzi iri kutengeswa nemari iri pamusoro.
Hapana Kuwirirana MuZanu-PF Pamusoro Pezvekuita Nemuzinda weBlue Roof
Pane kusawirirana mubato reZanu-PF pamusoro pezvokuita nedzimba dzakasiyiwa nevaimbove mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe, zvikuru sei imba yavo yeBlue Roof.
Veruzhinji Vokurudzirwa Kuti Vafashaidze Mvura Yekunwa Senzira Yekudzivirira Zvirwere zveManyoka
Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezvehutano, Doctor Portia Manhangazira vari kukudzira veruzhinji kuti vafashaidze mvura yavo yekunwa zvikuru vari mumadhorobha, sezvo zvirwere zvemanyoka zviri kuwanda, zvikuru kuvana vadiki.
Hurumende Yotora Matanho eKugadzirisa Dambudziko reMvura muNyika
Hurumende iri kutora matanho akawanda anosanganisira kuvaka madhamu pamwe nekutenga mishonga inochenesa mvura senzira yekupedza dambudziko remvura mumadhora nemaguta munyika.